vendredi, 29 mars 2019 19:19
Manakara: Naka lesona tamin'ny tantara
Nisy androany teto Manakara ny lanonam-pahatsiarovana ireo nahafoy ny ainy ho an'ny Firenena. Notsaroina ireo izay tsy nikely soroka nitolona ho an'ny fahafahana, ireo no tena taratry ny hambompom-pirenena.
"Manery antsika handray andraikitra izany", hoy i Beboarimisa Ralava ary "manery antsika tsy hanana ahiahy fa hanohy hibanjina ny tombotsoa ambonin'ny Repoblika".
vendredi, 29 mars 2019 18:58
29 martsa Toamasina: Fanomezam-boninahitra ireo Maritiora sy ireo Bekotro maro holatra
Tonga nametraka fehezam-boninkazo fahatsiarovana ireo Maritiora, mpitolona tamin'ny 29 martsa 1947, ny Kandida ho Solombavambahoaka, Irma Naharimamy, rehefa vita ny fotoam-bavaka iraisam-pinoana natao tao amin'ny Fiangonana Katolika Notre Dame.
Nisy fiaraha-misakafo niaraka tamin'ireo Bekotro maro holatra tao amin'ny Trano Kintana taorian'izay.
vendredi, 29 mars 2019 18:57
Andraikiba-Antsirabe: Tovolahy iray maty an-drano
Nilomano tao amin'ny farihin'Andraikiba niaraka tamin'ny namany ity tovolahy, 22 taona ity. Gaga ilay namany fa toa miha-milentika sady mankany afovoan-drano ity tovolahy.
Nisintona azy hiverina ilay namany fa tsy nahomby, niantso vonjy tamin'ny mpitsangatsangana teny an-tanety, nefa tsy niraika ny olona, nihevitra fa misangisangy ny ao anaty rano, ny sasany nilaza ho tsy mahay rano. Maty an-drano tao ilay zazalahy.
Hitsangatsangana no nialany ny tokantranony saingy dia fahafatesana no hita.
Nampandrenesin'ireo mahalala ilay tovolahy ny fianakaviany.
vendredi, 29 mars 2019 10:07
Ramparany Anthelme: « Hijoro hanohy ny ezaka fitiavan-tanindrazana »
Andro ahatsiarovana ireo raiamandrenitsika namoy ny ainy noho ny fanavontana an’i Madagasikara teo ambany vahohon’ireo mpanjanaka ity andron’ny 29 martsa ity, hoy Ramparany Anthelme ka « tsy ho avelantsika ho raraka antany izany, koa hijoro hatrany isika hanohy izany ezaka fitiavantanindrazana izany satria ny tena tia, dia izay mahafoy ny ainy».
Nanao velirano ity zanak’ambanivolo, kandida solombavambahoaka eto Mananjary ity, nilaza fa « hotolorantsika ny voninahitra mendrika azy ireo bekotro maro holatra izay akanga sisa nanamborana, ary hoporofointsika amin’ny asa fampandrosoana ny fitiavantsika an’i Madagasikara, satria Masina loatra i Madagasikara, indrindra fa i Mananjary ».
Tontosaina izao maraina izao ao amin'ny fiangonana Katolika Notre Dame, ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana, ahatsiarovana ny tolom-panafahana sy ireo namoy ny ainy, ary nana-takaitra tamin'ny 29 mars 1947.
Tonga maro ireo taranaka mpitolona, ireo sivily sy miaramila, teto Toamasina sy ny manodidina.
Niaraka niombom-bavaka tamin'izany ihany koa ny kandida ho solombavambahoaka eto Toamasina I, Irmah Naharimamy sy ireo mpiara-dia aminy.
Madagascar: Situation nutritionnelle alarmante
47.3 % des enfants malagasy de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique, et 51.2 % des enfants de moins de 5 ans sont anémiques, et seulement 42.7% ont reçu des suppléments de vitamine A.
vendredi, 29 mars 2019 09:39
Fahatsiarovana ny tsingerintaona faha-72 ny tolom-panafahana 1947
Rakitra sy tadidy mitantara ny zava-nitranga.
vendredi, 29 mars 2019 09:36
Avis HCC sur logo « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina »